आईपीएलको टिम अफ दि टुर्नामेन्टमा कुन टिमका कति खेलाडी ?
ऐजेन्सी । भारतमा सम्पन्न इडियन प्रिमियर लिग आइपीएलको यो सिजनको टिम अफ दि टुर्नामेन्टमा सन्दीप लामीछानेको टिम दिल्लीबाट तीन जना खेलाडी परेका छन् । क्रिकेट सम्बन्धित वेबसाइट क्रिकइन्फोका अनुसार बर्षको टिममा दिल्लीका शिखर धवन, रिशव पन्त र कागिसो रावाडा परेका छन् । त्यस्तै उपाधि विजेता टिम मुम्बइबाट हार्दिक पाण्ड्या र जसप्रित बुम्राहा परेका छन् भने […]
मुम्बई बन्यो आईपीएलको च्याम्पियन
ऐजेन्सी । मुम्बई इन्डियन्स १२औं संस्करणको इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । आइतबार भएको फाइनलमा साविकको विजेता चेन्नई सुपर किङ्सलाई १ रनले हराउँर्दैै मुम्बई च्याम्पियन बनेको हो । हैदरावादस्थित राजिब गान्धी क्रिकेट स्टेडियममा मुम्बईले दिएको १ सय ५० रनको लक्ष्य चेन्नईले २० ओभर ७ विकेटको क्षतिमा १ सय ४८ रन मात्र […]
आइपिएलको उपाधिका लागि आज फाइनल भिडन्त, मुम्बई र चेन्नई भिड्दै
यो सिजनको उपाधि भिडन्त भने आज नेपाली समय अनुसार राती पौने ८ बजेबाट हैदरावादमा हुनेछ
आइपिएलको फाइनल प्रतिष्पर्धा आइतवार, चेन्नई र मुम्बई भिड्ने
शुक्रबार सम्पन्न दोस्रो क्वालिफायरमा चेन्नईले दिल्ली क्यापिटल्सलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै मुम्बईसँग उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो ।
आईपीएलमा दिल्लीले चेन्नेईलाई दियो १४८ रनको चुनौति
काठमाडौं–इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिताको जारी खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले चेन्नेई सुपर किंग्स समक्ष १४८ रनको चुनौति प्रस्तुत गरेको छ । फाइनल प्रवेशका लागि भिसखापट्नाममा जारी खेलमा टस हारेर व्याटिङको निम्तो पाएको दिल्लीले निर्धारित २० ओभरको खेलमा ९ विकेट गुमाएर १ सय ४७ रन बनाएको छ । दिल्लीका लागि ऋषभ पन्तले ३८ र कोलिन मुन्रोले […]
शनिवारदेखि काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिङ रेस्लिङ प्रतियोगिता
नेपाल रिङ रेस्लिङ संघको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा नेपालसहित ८ देशका रेस्लहरु सहभागी हुनेछन ।
इन्डो नेपाल कराँते प्रतियोगिता सुरु
सातौं इन्डो नेपाल कराँते प्रतियोगिता आजबाट सुरु भएको छ । २ सय २३ जना प्रतियोगी रहेको कराँते प्रतियोगिता आजबाट बालुवाटारमा सुरु भएको हो । प्रतियोगितामा भारतका ३३ र नेपालका १ सय ९० खेलाडि सहभागि रहेको आयोजक नेपाल गोजुकाई कराँते डो संघले जनाएको छ ।
आईपीएलमा आज दिल्ली र चेन्नई भिड्ने, सन्दीप टीममा कि बेन्चमा ?
एजेन्सी- इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत आज (शुक्रबार)को खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र चेन्नई सुपर किंग्सबीच खेल हुँदैछ । आईपीएलको दोस्रो क्वालिफायर खेलमा दुवै टोली जीत दर्ता गर्ने योजनासहित मैदान उत्रने छन् । बेलुका पौने ८ बजे हुने खेलमा साविक विजेता टोली चेन्नईलाई पराजित गर्दै दिल्ली इतिहास रच्ने लक्ष्यमा छ । तेस्रो पटक क्वालिफायरमा स्थान बनाएको […]
एएफसी यु–१६ च्याम्पियनसिपको तालिका सार्वजनिक, नेपाल कठिन समुहमा
काठमाडौ । एएफसी यु–१६ च्याम्पियनसिप छनोटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ । एएफसीले बिहिबार सार्वजनीक गरेका समुह तालिका अनुसार नेपाल समुह एमा परेको छ । तालीका अनुसार नेपाल रहेको समुहमा ताजकिस्तान, जोर्डन, श्रीलंका र कुवेत छन् । नेपाल रहेको समुहको छनोट प्रतियोगिता जोर्डनमा आयोजना हुनेछ । छनोटको शीर्ष टिम प्रतियोगिताका लागि छनौट हुनेछ ।
च्याम्पियन्स लिग : टोटेनहम र अजाक्स भिड्दै
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाईनलको दोस्रो लेगमा बुधबार राति टोटेनहम र अजाक्स भिड्दैछन् । यी दुई टोलीबीचको खेल अजाक्सको घरेलु मैदानमा हुनेछ । पहिलो लेगमा अजाक्सले एक शुन्यको जित निकाल्दै अग्रता बनाएको थियो । यता, टोटेनहम पनि अजाक्सबिरुद्ध जित निकाल्ने लक्ष्यमा रहेको छ । डिफेन्डर जान भेर्टोनघनले दोस्रो लेग खेल्न सक्नेछन् । घरेलु मैदानमा […]
‘विप्लव’ समूहका दुई कार्यकर्ता बागलुङबाट पक्राउ
विरोधको नयाँ शैली : कमलपोखरीकाे माटोकाे टिका लगाएर बालुवाटरसम्म मार्चपास
‘काउन्टर सभा’को तयारीमा ओली समूह